အူပါမီကာနို ၊ ဒီမီရယ် ၊ ဘိုတန်တို့ထဲက ဘယ်သူ​က အာဆင်နယ်အသင်းဆီ ရောက်လာမလဲ??? - MySport Myanmar
အူပါမီကာနို ၊ ဒီမီရယ် ၊ ဘိုတန်တို့ထဲက ဘယ်သူ​က အာဆင်နယ်အသင်းဆီ ရောက်လာမလဲ???
လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာ နည်းပြသုံးဦးအထိ အပြောင်းအလဲလုပ်ထားရတဲ့ လန်ဒန်မြို့ အခြေစိုက် အင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရလဒ်ပိုင်း မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အလယ်မှာ ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အူဘာမီယန်းလို ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင် တစ်ဦးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပေမယ့် ခံစစ်ပိုင်းမှာ အမှားအယွင်းများလွန်းတာကြောင့် ယခုလို ရလဒ်ဆိုးဝါးနေတာဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အာတီတာကို မန်စီးတီးအသင်းကနေ ခေါ်ယူကာ အသင်းနည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့အပြီးမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အရင်လို အတိုပေးကစားဟန်ကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ခဲ့ရပေမယ့် ခံစစ်ပိုင်းမှာတော့ အမှားအယွင်းတွေရှိနေဆဲပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ဗဟိုခံစစ် ကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ချိန်ရွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန် သတင်းတွေထွက်ပေါ်မှုအရ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လစ်ဇက်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ အူပါမီကာနို ၊ ဂျူဗင်တပ်နောက်ခံလူ ဒီမီရယ်နဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း နောက်ခံလူ ဘိုတန်တို့ကို ချိတ်ဆက်လျက်ရှိတယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ အသက်အရွယ် ငယ်သေးတဲ့ အူပါကာမီနိုနဲ့ ဒီမီရယ်တို့ကို အသင်းမှာ မြင်တွေ့လိုနေပေမယ့် ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဘိုတန်ကိုပဲ ခေါ်ယူနိုင်မှာပါလို့ သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ အလားအလာကောင်းတွေရှိနေတဲ့ ဒီမီရယ်ကို အသင်းကနေ အလွယ်တကူ ထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုထားသလို လစ်ဇက်အသင်းကလည်း အူပါမီကာနိုကို ရောင်းချမှာဖြစ်ပေမယ့် ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို အနိမ့်ဆုံး ပေါင်၄၀သန်းဝန်းကျင် တောင်းဆိုမှာဖြစ်တာကြောင့် အဆိုပါ ကစားသမားနှစ်ဦးဟာ အာဆင်နယ်ကို ရောက်လာဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါးနေပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ အသက်၃၁နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘိုတန်ဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့် ရရှိထားသလို သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဟာလည်း ပေါင် ၁၂သန်းဝန်းကျင်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်တာကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ ကိုက်ညီနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဇန်နဝါရီကာလမှာ အာဆင်နယ်အသင်းဆီ ဘိုတန်ဟာ ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
လကျရှိဘောလုံးရာသီမှာ နညျးပွသုံးဦးအထိ အပွောငျးအလဲလုပျထားရတဲ့ လနျဒနျမွို့ အခွစေိုကျ အငျအားကွီးအသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ရလဒျပိုငျး မတညျငွိမျမှုတှနေဲ့အတူ အမှတျပေးဇယားရဲ့ အလယျမှာ ရုနျးကနျနခေဲ့ရပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ အူဘာမီယနျးလို ထိပျတနျးဂိုးသှငျးရှငျ တဈဦးကို ပိုငျဆိုငျထားခဲ့ပမေယျ့ ခံစဈပိုငျးမှာ အမှားအယှငျးမြားလှနျးတာကွောငျ့ ယခုလို ရလဒျဆိုးဝါးနတောဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
အသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ အာတီတာကို မနျစီးတီးအသငျးကနေ ချေါယူကာ အသငျးနညျးပွသဈအဖွဈ ခနျ့အပျခဲ့အပွီးမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အရငျလို အတိုပေးကစားဟနျကို ပွနျလညျမွငျတှခေဲ့ရပမေယျ့ ခံစဈပိုငျးမှာတော့ အမှားအယှငျးတှရှေိနဆေဲပါ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ ဗဟိုခံစဈ ကစားသမားတဈဦးကို ချေါယူဖို့အတှကျ ခြိနျရှယျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျ သတငျးတှထှေကျပျေါမှုအရ အာဆငျနယျအသငျးဟာ လဈဇကျအသငျးရဲ့ နောကျခံလူ အူပါမီကာနို ၊ ဂြူဗငျတပျနောကျခံလူ ဒီမီရယျနဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျး နောကျခံလူ ဘိုတနျတို့ကို ခြိတျဆကျလကျြရှိတယျလို့ သိထားရပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပရိသတျတှဟော အသကျအရှယျ ငယျသေးတဲ့ အူပါကာမီနိုနဲ့ ဒီမီရယျတို့ကို အသငျးမှာ မွငျတှလေို့နပေမေယျ့ ဘောလုံးကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဘိုတနျကိုပဲ ချေါယူနိုငျမှာပါလို့ သုံးသပျထားကွပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျအသငျးဟာ အလားအလာကောငျးတှရှေိနတေဲ့ ဒီမီရယျကို အသငျးကနေ အလှယျတကူ ထှကျခှာခှငျ့ပေးမှာ မဟုတျဘူးလို့ ပွောဆိုထားသလို လဈဇကျအသငျးကလညျး အူပါမီကာနိုကို ရောငျးခမြှာဖွဈပမေယျ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးကို အနိမျ့ဆုံး ပေါငျ၄၀သနျးဝနျးကငျြ တောငျးဆိုမှာဖွဈတာကွောငျ့ အဆိုပါ ကစားသမားနှဈဦးဟာ အာဆငျနယျကို ရောကျလာဖို့ အခှငျ့အရေးနညျးပါးနပေါတယျ။ တဈဖကျမှာ အသကျ၃၁နှဈအရှယျ ရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ဘိုတနျဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးကနေ ထှကျခှာခှငျ့ ရရှိထားသလို သူ့ကိုချေါယူဖို့ဟာလညျး ပေါငျ ၁၂သနျးဝနျးကငျြသာ ကသြငျ့မှာဖွဈတာကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပျေါလစီနဲ့ ကိုကျညီနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဇနျနဝါရီကာလမှာ အာဆငျနယျအသငျးဆီ ဘိုတနျဟာ ရောကျလာနိုငျတယျလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။
MySport Myanmar2020-01-06T03:12:39+06:30January 6th, 2020|Bundesliga, Football, Premier League, Serie A|